Nalalka Sofa soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda - Shenzhen Xiangfu Go'aan Warshadaha Co., Ltd
Guriga > Alaabada > Wareeg Xaraashka > Wareeg Caaryada Wax soo saar Taxanaha > Nalalka Sofa
The soo socda waa ku saabsan Nalalka fadhiga la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay Nalalka fadhiga.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Wajiyada Xiangfu HDPE Home taxanaha
1.Muuqa Qalabka: PP / PC / PV / PS ECT
4.Keyword: Meelaha Wareega ah
S: Miyaan qaadi karaa shaybaarada?
A: Haa, dalabka muunadda ayaa loo heli karaa hubinta tayada iyo imtixaanka suuqa, waxayna noqon doontaa lacag ururinta xamuulka. Haddii muunad fudud ah, lacag kaa qaadi mayno; Haddii saamiyada OEM / ODM, waxaan ku dallaci doonnaa qiimaha muunadda.
A: MOQ waa 10000pcs marki ay haysato alaabada.
S: Waa maxay waqtiga keenista?
A: Qaybaha istaambiga caadiga ah waa 3 ~ 7 maalmood kadib bixinta. Haddii OEM ama sameyso caaryada, waxaan kuu xaqiijin doonaa waqtiga gaarsiinta adiga.
A: Shuruudaha lacag bixinta way noo dabacsan yihiin iyadoo la raacayo shuruudaha gaarka ah. Guud ahaan waxaan kugula talineynaa 30% TT deposit, dheelitirka ayaa la bixiyaa ka hor inta aan la keenin
Aqoon-is-weydaarsiga Farsamooyinka Maskaxda
Warshadda caaryada caaga ah: Dhoobo cirbadaha / Faraha Dhoofin / Dabka Faraha / Fuuq-baxa
Aqoon-isweydaarsiga Qalabka Qalabka
Mashiinka Wax Soosaarka Soosaarka: Kuluubka Dhimashada / Stamping / Forging / Sheet Iron / steel Mouid
Seminarka Mashiinka CNC
Waxsoosaarka Mashiinka CNC: Qeybaha Caafimaadka ee Joogtada ah / Qeybaha Isgaarsiinta Telefishanka / Qeybaha Isboortiga Aero / Qeybaha Isboortiga Gawaarida / Qeybaha Korantada Dijitaalka ah ect
Aqoon isweydaarsiga Mooshinka
Soosaarida Weellaha Faraha: Miis / Kursi / Sanduuq / Weeliyaha / Saliida / Saliida hadalka ect
Hot Tags: Nalalka Sofa, Shigudahaaha, Bixiyeyaasha, Warshadda, Soosaarayaasha, Sameeyay gudaha Shigudahaaha, Aasaasay, Rakhiis, Qiimo, Oraah, Iibso, Sare Tayo, Raagaya, Hoose Qiimo, Gudaha Dukaan Bilaash Muunad
Nalalka Qaxwada Miis
ODM Xayawaan Caag Dhalo
Furfurnaan Caag Sanduuq